Sida loo Helo and Download sawir Si fudud
> Resource > Download > Sida loo Download Kartuunka Videos fudayd iyo Free
Ma aha oo kaliya caruurta, laakiin sidoo kale qofka weyn ku raaxeeysanayaan sawir daawashada. Waxaa jira wax badan oo ka mid ah website-yada in ay bixiyaan content sida loogu talagalay dadka si online qulquli. Laakiin qaar ka mid ah oo idinka mid ah waxay doonayaan in ka badan, sida daawashada sawir ku saabsan qalabka la qaadi karo xitaa marka uu jiro xiriir internet laga heli lahayn. Sida loo sameeyo dhacay? Ha welwelin. Waxaan aad u hesho xal weyn. The Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ) wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo bixi videos cartoon ka websites badan, sida Hulu, YouTube iyo in ka badan. Si aad u ogaato halka aad ka heli kartaa sawir online, wuxuu kuu diri karaa liiska of sites cartoon sare. Hadda waxaan kaliya sii wadaan in ay ka hadlaan sida ay u isticmaalaan in ay soo bixi AllMyTube videos cartoon ah.
Waa inaad marka hore kala soo bixi barnaamijka si loo soo dajiyo on your computer. Waxaa jira laba nooc si aad u doorato. Waxaan doonaa qaadan version Windows sida tusaale.
1 Raadi iyo ciyaaro videos cartoon aad jeceshahay
Raadi sawir aad jeceshahay internet-ka. Waxa aad isticmaali kartaa liiska ugu sareeya ee goobaha cartoon si aad u hesho bartilmaameedka. Markaas furo videos ay ku ciyaaraan.
Fiiro gaar ah: The videos in la furay mid ka mid ah kuwan soo socda saddex daalacashada waxaa lagu ogaan karaa oo lagala soo bixi. Daalacashada waa IE, Firefox iyo Chrome.
2 Download cartoon videos la mid click
Marka video la ciyaaro, aad dul istaagin kartaa mouse ka badan midig sare ee shaashadda video ah. Markaas waxaad ka heli kartaa a Download button. Riix badhanka si ay u bilaabaan soo degsado video ah.
Waxaa sidoo kale jira hab kale. Copy url ee video, oo markaas waa inay barnaamijka si riix URL paste button. Waxa kale oo aad ka heli kartaa video iyada oo loo marayo hab this.
3 Beddelaan videos in qaabab kale
Taga laybareeriga soo bixi si aad u hesho videos ka dib markii uu soo bixi. Guji ka badalo button on xaq haddii aad rabto in aad si loogu badalo videos in ay qaab kale. Dooranaysaa qaab ee Output Qaabka uu furmo in arbushin ilaa doona. Riix OK si aad u bilowdo qaab beddelidda.
Fiiro gaar ah: Si aad u hesho videos galka maxalliga ah, oo kaliya xaq u riix video iyo dooran fur Folder soo bixi ka . Waxaad gacanta ku wareejin karaa qalabka la qaadi karo aad ka folder maxalliga ah.
Weli yaabeen in this video cartoon downloader ma shaqeynayaa? Waa Joogso oo ka soo dejisan mid u leedahay in isku day ah. Waa arrin aad u fududahay in la isticmaalo iyo daliil u jirta in ay soo bixi videos ka goobo badan. Waa maxay sababta aan u siiyo isku day ah?
Video Songs Download u Mobile Phone, iPhone, macruufka Phone ama Android Phone
Sidee Waxaad ka TV.com Download karaa Videos